စုဘူး Combo | Telenor Myanmar
သုံးမကုန်တဲ့ ဒေတာတွေမဆုံးရှုံးဖို့၊ အလေအလွင့်မဖြစ်စေဖို့ *979*2*2# ကို အခုပဲခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။ တယ်လီနော အသုံးပြုသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် လက်ရှိ စုဘူး Combo အစီအစဉ်များကို ပိုကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ အစီအစဉ်လာပါပြီ။
တယ်လီနောအသုံးပြုသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် လက်ရှိ စုဘူး Combo အစီအစဉ်များကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါပြီ။
လက်ကျန်ဒေတာများကို ပေါင်းထည့်ဖို့ အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကို အရင်လို (၇)ရက်အတွင်း ထပ်ဝယ်ယူဖို့မလိုဘဲ အသုံးပြုသူများမှ မိမိ နှစ်သက်ရာ အချိန်တွင်း စုဘူး Comboအစီအစဉ်တစ်ခုကို ထပ်မံ ဝယ်ယူလိုက်ရုံနဲ့ ရှေ့အစီအစဉ်မှ လက်ကျန်ဒေတာများကို ပေါင်းထည့်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုကောင်းတဲ့ စုဘူး Combo အစီအစဉ်အသစ်မှာ ဘာတွေ ပိုရမှာလဲ!
မိတ်ဆွေရဲ့ မသုံးဖြစ်တဲ့ ဒေတာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ထားပေးမလဲ ဆိုတော့
တယ်လီနောအသုံးပြုသူ မိတ်ဆွေဟာ စုဘူး Comboအစီအစဉ် 2GB အားဝယ်ယူပြီး 1GB ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့တယ် ထားပါစို့။ ယခု ပိုကောင်းတဲ့ စုဘူး Comboအစီအစဉ်သစ်မှာ
နောက်ထပ် စုဘူး Combo အစီအစဉ်အသစ်ကို ဘယ်အချိန်မှာပဲဝယ်ဝယ် လက်ကျန်ဒေတာ 1GB ကို မိတ်ဆွေထပ်ဝယ်တဲ့ စုဘူး Comboအစီအစဉ်သစ်မှာ ပေါင်းထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ကျန်ဒေတာ 1GB အတွက် ကုန်ဆုံးသက်တမ်းမရှိတော့ဘူး။
လူကြီးမင်းရဲ့ ဒေတာ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးရန်
*9124# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
နှစ်သက်ရာ ဒေတာအစီအစဉ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ နှုန်းထားများနဲ့ ရရှိနိုင်မယ့် ဒေတာပမာဏများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပတ်ကေ့ချ်ကို ဒီကနေ တခါတည်းဝယ်ဖို့ '၀ယ်မည်' ကို နှိပ်နိုင်သလို MyTelenor App ကနေလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(900MB Data + 100MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo 1000MB
(630MB Data + 70MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo 700 MB
(810MB Data + 90MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo 900 MB
(1382MB Data + 154MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo 1.5 GB
(2304MB Data + 256MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo 2.5 GB
(3686MB Data + 410MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo4GB
(5530MB Data + 614MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo6GB
(14285MB Data + 1587MB FB Data)
ဝယ်ယူနေသော Suboo Combo 15.5 GB
"Suboo Combo" changes was effective starting from 21st June 2019.
တယ်လီနောရဲ့ Prepaid အသုံးပြုသူများအတွက်သာအကြုံးဝင်ပါသည်။
စုဘူး Combo ပက်ကေ့ချ် များမှာ သက်တမ်း ရက် ၃၀ အတွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Standard ဒေတာနှင့် Facebook ဒေတာနှစ်မျိုးပါ၀င်သော စုဘူး Combo ပက်ကေ့ချ်များတွင် သက်တမ်း ရက်(၃၀) ကျော်သွားပါက လက်ကျန်ရှိနေသော Standard ဒေတာများကို နောက်တကြိမ်ထပ်မံဝယ်ယူပြီးလျှင် ထပ်ပေါင်းအသုံးပြုခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
တကြိမ်မက ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး လက်ကျန်ပမာဏများမှာ စုပေါင်းသွားပြီး အများဆုံးသက်တမ်းကို ရရှိပါမည်။
စုဘူး Comboမှာ အထူးဒေတာအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အင်တာနက်မဆိုအသုံးမပြုနိုင်တဲ့ ဒေတာအစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကာလ ရက် (၃၀) ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကာလ ရက် (၃၀) ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ လက်ကျန်ဒေတာပမာဏများကို ကုန်ဆုံးသွားသည့်ရက်မှစ၍ နောက် စုဘူး Combo အစီအစဉ်အသစ်ထပ်မံဝယ်ယူပါက လက်ကျန်အကျိုးခံစားခွင့်များကို အသစ်ရရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စုဘူး Comboအစီအစဉ်ကိုနောက်ဆုံးထပ်မံရယူထားသည့်နေ့မှ ရက် (၃၀)အထိ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စုဘူး Comboအတွက် စိတ်ဝင်စားကျေနပ်ဖွယ်စျေးနှုန်းများနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်သစ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ။
စတင်မိတ်ဆက်သည့်ရက် - ( 9th January 2019 )
စုဘူး Comboအတွက် စိတ်ဝင်စားကျေနပ်ဖွယ်စျေးနှုန်းများနဲ့ ဒေတာအစီအစဉ်သစ် ၅ ခု ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး ယခုကာလတိုပရိုမိုးရှင်းမှာ ရက် ၉၀ အတွင်းသာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Price ( Ks )
Suboo Combo 700 MB
Suboo Combo 900 MB
Suboo Combo 1000 MB
999 Ks/ 949 Ks
Suboo Combo 1.5 GB
1499 Ks/ 1455 Ks
Suboo Combo 2.5 GB
2499 Ks/ 2455 Ks
Suboo Combo4GB
3999 Ks/ 3888 Ks
Suboo Combo6GB
5999 Ks/ 5888 Ks
Suboo Combo 15.5 GB
စုဘူး Comboအစီအစဉ်တွေကို ယခုအခါ ဘယ်လိုရယူရမှာလဲ။
MyTelenor/ Wow Box
Suboo Combo 700 MB ( 630MB Data + 70MB FB Data )
Suboo Combo 900 MB ( 810MB Data + 90MB FB Data )
Suboo Combo 1000 MB ( 900MB Data + 100MB FB Data )
Suboo Combo 1.5 GB ( 1382MB Data + 154MB FB Data )
Suboo Combo 2.5 GB ( 2304MB Data + 256MB FB Data )
Suboo Combo4GB ( 3686MB Data + 410MB FB Data )
Suboo Combo6GB ( 5530MB Data + 614MB FB Data )
Suboo Combo 15.5 GB ( 14285MB Data + 1587MB FB Data )
သုံးစွဲသူမှ ယခင် စုဘူး Comboအစီအစဉ်ဟောင်းမှ လက်ကျန်ဒေတာများရှိနေပြီး ယခု ပရိုမိုးရှင်းရရှိသည့် စုဘူး Comboအစီအစဉ်သစ်ကို ရယူလိုက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။
သုံးစွဲသူမှ စုဘူး Combo ပရိုးမိုးရှင်းအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုခုကိုဝယ်ယူလိုက်သည့်အခါတွင် မူလလက်ကျန်ရှိနေသော စုဘူး Comboအစီအစဉ်ဟောင်းမှ ဒေတာလက်ကျန်များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ နောက်ဆုံး ရယူထားသည့် စုဘူး Comboအစီအစဉ်သက်တမ်းကာလအတိုင်းရရှိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်ပါတယ်။ စုဘူး Comboအစီအစဉ်သစ်ကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခု စုဘူး Comboအစီအစဉ်သစ်တွေကရော လက်ကျန်ဒေတာများကို ရာသက်ပန် သိမ်းဆည်း/သယ်ဆောင် သွားခွင့်ရှိမှာလား။
အသစ် စုဘူး Comboများတွင် လက်ကျန်ဒေတာများကို ရာသက်ပန် သိမ်းဆည်း/သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး Facebook ဒေတာများကိုတော့ သက်တမ်း ရက် (၃၀) အတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
စုဘူး Comboအစီအစဉ်မှ လက်ကျန်ဒေတာပမာဏနှင့် သိမ်းဆည်းသယ်ဆောင်ထားသော လက်ကျန်ဒေတာပမာဏ တို့ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးသိရှိနိုင်မှာလဲ?
*9124#ကိုခေါ်ဆိုပြီး စုဘူး Comboနှင့်ပတ်သတ်သော လက်ကျန်ဒေတာနဲ့ လက်ရှိသိမ်းဆည်းသယ်ဆောင်ထားသော လက်ကျန်ဒေတာပမာဏများကို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ပါတယ်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် နှင့် သုံးစွဲခွင့်သက်တမ်းမည်သို့ကွာခြားပါသနည်း။
ဒါက​တော့ စုဘူး Comboအစီအစဉ်​​တွေရဲ့ ထူးခြားချက်​ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အစီအစဉ်​ တစ်​ခုကို ဝယ်​ယုလိုက်​ပြီဆိုတာနဲ့ ဝယ်​ယူလိုက်​တဲ့​နေ့မှ ​နောက်​ထပ်​ရက်​၃၀သက်​တမ်​း ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ရက်​၃၀​ကျော်​လွန်​သွားလျှင်​ အစီအစဉ်​ရဲ့သက်​တမ်​းကုန်​ဆုံးမှာဖြစ်​​သော်​လည်​း လက်​ကျန်​​ဒေတာများရှိ​နေမယ်​ဆိုပါက အဲ့ဒီလက်​ကျန်​​ဒေတာများမှာ အသုံးပြုသူ၏ ဆင်​းကတ်​သက်​တမ်​းရှိသ​ရွေ့ ကျန်​ရှိ​နေမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ နှစ်​သက်​ရာအချိန်​မှာ ​နောက်​ထပ်​ ​ စုဘူး Comboအစီအစဉ်​ကို ဝယ်​ယူလိုက်​တာနဲ့ လက်​ကျန်​​ဒေတာများကို ပြန်​လည်​အသုံးပြုသွားနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​။
အကယ်၍ စုဘူး Comboကို အခြားဒေတာ packများ နှင့်တွဲဝယ်ထားပါက မည်သည့်ဒေတာpackမှ အရင်ဖြတ်ပါမလဲ။
အကယ်၍ စုဘူး Comboကို အခြားဒေတာ packများ (ဥပမာ Facebook Data Pack, etc..)
၁) Daily Data Pack မှ အရင် ဖြတ်ပါမည်
၂) ထို့နောက် Weekly Data Pack မှ ဖြတ်ပါမည်
၃) ထို့နောက် Monthly Data Pack မှ ဖြတ်ပြီးနောက် လက်ကျန် စုဘူး Comboရှိနေပါက စုဘူး Comboမှ ဖြတ်ပါမည်
ထိုဒေတာ packများကုန်သွားမှသာ စုဘူး Combo မှဖြတ်ပါမည်။
အခြား သုံးစွဲမှုများကို ဘယ်လိုကောက်ခံပါမလဲ။
အခြားသုံးစွဲမှုများကို လက်ရှိတွင် သုံးစွဲနေသော price plan အတိုင်းကောက်ခံပါမည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www.telenor.com.mm တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။။
အခြား Service များကိုမည်သို့ကောက်ခံမည်နည်း။
အခြား (Balance transfer, Kyo Thone, MY Tune etc) ကိုကောက်ခံမှုမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
စုဘူးမှာ ​ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အပြောင်းအလဲက ဘာများလဲ။
ဒေတာတွေပေါင်းထည့်နိုင်မယ့်အချိန်ကို ၇ ရက်မှ ဆင်းကတ်သက်တမ်းရှိသရွေ့သို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘီလ်ဖြတ်တောက်ကြိမ်မှာ ဘယ်လောက်မိနစ် တစ်ကြိမ် ဖြတ်တောက်ပါသလဲ။
အင်တာနက်အသုံးပြုများအတွက် 1MB လျှင် တစ်ကြိမ်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
စုဘူး Comboကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဝယ်ယူလို့ရပါသလား။
တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။သက်တမ်းမှာ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်ရက်မှရက်၃၀အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးခံစားခွင့်များကို သက်တမ်းမကုန်ခင်တွင် အကုန်သုံးစွဲလိုက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါမလဲ။
သက်တမ်းမကုန်ခင်တွင် အကုန်သုံးစွဲလိုက်ပါက နောက်တစ်ကြိမ်သုံးစွဲချိန်အထိ roll over လုပ်ရန်မကျန်တော့ပါ။
စုဘူးအင်တာနက် အစီအစဉ်လက်ကျန်ကို မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။
*9124# သို့ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ MyTelenor app တွင်လည်း Pocket -> Balance မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Prepaid နှင့် postpaid customers အားလုံးအတွက် အကြုံးဝင်ပါသလား။
မပါ၀င်ပါ… Prepaid customers များအတွက်သာ
စုဘူး Comboအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော စျေးနှုန်းများတွင် အခွန် ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါသလား။
သက်ဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းထား ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
900MB ကိုဘယ်လို ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသလဲ။
၉၀၀MBကို ၉၄၉ ကျပ်ကျသင့်ပြီး (အခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီး)
ယခင် ၅၈၅MB ပက်ကေ့ချ်ကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ။
၅၈၅MB ပက်ကေ့ချ်ကို ၀ယ်ယူရရှိခြင်း မရှိနိုင်တော့ပါ(18 June မှစပြီး) ။ ပိုမို သက်သာသော ရ၀၀MB နှင့် ၉၀၀MB ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။